EX - ABSDF: အစိုးရ၏ပြည်သူသို့တင်ရှိနေသောကြွေး
ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟုကြေညာကာ ယခင်နည်းများအတိုင်း ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရန်ကြိုးစားနေကြ ပါသည်၊ နှစ်ပေါင်း(၅၀) ကျော်မျှ စစ်တပ်အစိုးရ အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြခြင်း၏ အကျိုးရလာဒ်ကိုယနေ့ မြန်မာပြည် အခြေ အနေများကိုကြည့်ပြီး၊ သုံးသပ်အကဲဖြတ်နိုင်ကြပါသည်၊
အဖက်ဖက်ကအားရ ဂုဏ်ယူစရာမရှိပါ၊ နေပြည်တော်တွင် ကြီးမားခန့်ညားသော အဆောက်အဦးကြီးများဆောက်လုပ်ကာ အ၀တ်အစား သစ်သစ် လွင်လွင်ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်တော် ကြီး များ၊ တိုင်းပြည်ရေးရာများကို ဆွေးနွေးနေကြသော်လည်း ပြည်သူပြည်သား အများစုမှာ ဆင်းရဲတွင်း သံသရာ တွင်တ၀ဲဝဲလည်နေကြရဆဲဖြစ်ပါသည်။
If we really LOVE Myanmar, please do not so selfish to TOP LEADER, PRESIDENT, MINISTERS, GOVERNMENT TOP OFFICERS, U-BAING, MIC, FIC INVESTMENT COMMETTEE MEMBERS..
This time, don't want to say "middle level gov officers" and "low level gov officers".
Facts is "all 90% TOP Myanmar officers are ex-military officer"